, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिए राजीनामा
काठमाडौं, भदौ १९ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएका छन् । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिनु अघि उनी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बिदाई कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
राष्ट्रियसभाको रिक्त एक पदमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सरकारले सिफारिस गर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गराएका थिए । नेकपा सचिवालय बैठकले बिहीबार मात्र राष्ट्रियसभामा गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेकपाको यो निर्णयसँगै खतिवडाको संसद बन्ने बाटो बन्द भएको छ । तत्कालका लागि संसद बन्ने बाटो बन्दै भएसँगै उनको मन्त्री पद समेत भोलि शनिबारबाट स्वत: सकिदैछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेसम्म अप्ठ्यारो बेला सरकारमा बसेर काम गरेकोप्रति अर्थमन्त्री खतिवडालाई धन्यवाद दिएका छन् । खतिवडा सांसद नभई नै ६ महिनासम्म मन्त्री बनेका थिए ।